Raila Odinga oo ka digey in doorashada Kenya lagu shubto – Balcad.com Teyteyleey
Raila Odinga oo ka digey in doorashada Kenya lagu shubto
By Abdi Malik	 On Aug 6, 2017
Hogaamiyaha mucaaradka Kenya Rail Odinga ayaa ka digey in doorashada dalkiisa lagu shubto kahor labo maalmood oo ay shacabka Kenya u dareerayaan doorasho guud.
Wareysi uu siiyay taleefishinka Al Jazeera ra’iisalw asaarihii hore ee dalka Kenya ayuu ku sheegay in xisbigiisu diyaariyay qorshe uu ugaga hortagayo in natiijada la farageliyo.
“Waxay doonayaan Jubilee inay natiijada qiyaameeyaan,ma jirto wax kale oo sameyn karaan balse waan ku kalsoonahay in aan guul weyn ka gaareyno doorashada Talaadada dhacaysa.”ayuu yiri hogaamiyaha mucaaradka Kenya.
“Isku day kasta oo lagu doonayo in shacabka Kenya lagu qiyaaneeyo uma dulqaadan doono.”ayuu sii raaciyay Odinga.
Kenyatta oo toddobaadkii la soo dhaafay qudbad ka jeedinayay meel fagaare ah ayaa beeniyay in ay doonayaan in ay ku shubtaan doorashada oo ay qiyaano sameeyaan,balse waxa uu ku eedeeyay mucaaradka inay doonayaan qorshe lagu dhiso dowlad wadajir ah.
“Mucaaradka waxa ay waqtigooda ku lumiyeen shirar jaraa’id iyo la dagaalanka guddiga doorashada hadda ayay garowsdeen inay guuldaro la kulmayaan oo doorashada loogaga horeeyo.”ayuu yiri Kenyatta.
Inkabadan 19 million oo ruux ayaa isu diiwaangelisay inay codkooda dhiibtaan doorasho guud oo ka dhacaysa dalka Kenya Talaadada soo socota.
Hogaamiyaha xisbiga ODM Odinga oo hore u soo noqday Ra’iisal wasaare dalka Kenya ayaa la tartamaya Madaxweynaha dalka Kenya ahna hogaamiyaha xisbiga Jubilee doorasho ka dhacaysa Kenya Talaadada soo socota iyadoo laga cabsi qabo in rabshado ay hareeyaan doorashadan.
The post Raila Odinga oo ka digey in doorashada Kenya lagu shubto appeared first on Ilwareed Online.
Mudaharaad Gilgilay Puntland Iyo Xukuumadda oo Go’aan Gaartay
Golaha Wakiilada Somaliland oo doortay gudoomiye cusub(Daawo)